Vovoka Alpha GPC (28319-77-9) hplc≥98% | AASraw
/ Products / Nootropics vovoka / Vovoka Alpha GPC
Rating: SKU: 28319-77-9. Sokajy: Nootropics vovoka
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny vokatra azo avy amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry Alpha Alpha GPC (28319-77-9), eo ambany fanaraha-maso CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Alpha GPC vovoka, fantatra koa amin'ny anarana hoe glycerylphosphorylcholine L-Alpha na alfoscerate choline, dia nootropic voajanahary izay miasa irery ary miaraka amin'ireo nootropics hafa. Hita voajanahary ao amin'ny vatana amin'ny habetsany izy io ary amidy ara-barotra ho fakan'ny lecithin soja voadio….
Alpha GPC vovoka lahatsary
Alpha GPC karazany fototra karatra
Name: Alpha GPC vovoka
Molekular lanja: 257.22
Alpha GPC ny fampiroboroboana ny fiasan'ny atidoha sy ny tsimokaretina fanampiny
Raw Alpha GPC poids, L-Alpha glycerylphosphorylcholine, choline alfoscerate
Raw Alpha GPC vovoka
Ny fampitoviana amin'ny metabolisma phospholipid, ny Vola Raw Alpha GPC dia miasa haingana sy azo antoka, indrindra amin'ny fanomezana ny choline tena ilaina amin'ny atidoha.
Ny Alpha GPC dia manana toetra manan-danja tsy misy, ao anatin'izany ny fampivoarana ny fahatsiarovana sy ny fiarovana amin'ny fahanteran'ny atidoha. Fitsapana fitsaboana goavana ahitana mpandray anjara an'arivony no nampiseho fa fitsaboana mahomby ho an'ny fahatsiarovan-taona mifandraika amin'ny aretina isan-karazany, anisan'izany ny aretin'i Alzheimer, ny fisintahana vascular, ary ny fifandonana. Manana ny fahaiza-manaony amin'ny fampiasana ny valim-panafahana ihany koa izy ary ny fianarana dia manome soso-kevitra azy io koa fa mety amin'ny fitsaboana ny tebiteby.
Manana tombontsoa tsy mitongilana koa izy, anisan'izany ny fahafahana manatsara ny fahasalaman'ny sela ary mampiroborobo haingana ny fampiasana ara-batana. Ny fikarohana aloha dia maneho fa mety ho dopaminergic koa izy io, izay mampiroborobo ny famotsorana ny hôpônô dopamine, izay midika fa mety ho fitsaboana mety ho an'ny fahasalamana ny neurodegenerative toy ny aretina Parkinson ary mety ho fampihetseham-po ihany koa.
Fa ho an'ny mpampiasa maro nootropic, ny tena tanjaky ny Alpha GPC vovoka dia ao amin'ny potentiating properties rehefa nalaina miaraka amin'ny fanampiny fanampiny. Ny choline fanampiny izay mahavelona amin'ny atidoha ao amin'ny RAW Alpha GPC dia afaka manatsara ny fiantraikan'ny cacitative fihenan'ny racetams. Azony atao koa ny misakana ny aretin-kibo tsy dia mahasosotra loatra, izay iray amin'ireo voka-bary misy ifandraisany amin'ny racetam nootropics.
Ny pilina Alpha GPC dia mifehy ao Eoropa, izay itakiana ny fitsaboana ny aretin'ny Alzheimer ary amidy eo ambanin'ny marika Gliatilin sy Delecit. Ao Etazonia dia heverina ho fanafarana ny sakafo ary tsy misy prescription.
Ny dosage nomerika amin'ny alpha-GPC dia 300-600 mg, araka ny dosie mahazatra indrindra. Ity doka ity dia mifanaraka amin'ny fianarana mampiasa alfa-GPC mba hampitomboana ny vokatra herinaratra (600 mg) sy ny fianarana roa izay mampitombo ny fitomboan'ny tsimokaretina hormonina, ary mety ho doka tsara ho an'ny atleta izany.
Ho an'ny fampiasana ny alpha-GPC amin'ny fihenan'ny soritr'aretina ny fihenan'ny kognita, ny ankamaroan'ny fikarohana dia mampiasa donnera 1,200 mg isan'andro, mizara telo doses amin'ny 400 mg. Tsy azo antoka ny fihenan'ny dipoavatra ho tombon-tsoa, ​​fa ny mg 1,200 dia toa mifandray amin'ny soa iombonana.
Ny fanadihadiana ataon'ny rats dia manambara fa ny vokatry ny alpha-GPC dia miteraka tsiranoka ao amin'ny 300-600 mg / kg, izay homena tombony ho an'ny olombelona 48-96 mg / kg (ary ho an'ny 150lb olombelona, ​​3,272-6,545 mg isan'andro).
Fampitandremana momba ny vovobony Alpha GPC
Na dia loharanon-karena voajanahary aza ny choline, ny fampitomboana ny endrika mifantoka dia mety mahatonga ny Alpha GPC ho an'ny vovobony. Ny vokatry ny fitefena Alpha Alpha GPC dia ny aretin'andoha na fanindroany, izay matetika vokatry ny famokarana choline loatra ao amin'ny atidoha. Ny olona sasany, toy ny "biohacker" malaza Dave Asprey, dia milaza fa avo lenta amin'ny choline izy ireo ary miteraka aretina rehefa manome fanazavana fanampiny.
Ny voka-dratsin'ny ràfa Alpha GPC Alpha dia ahitana zavatra toy ny fisafotofotoana, erythema, ary ny tsy fahitan-tory (avy amin'ny fanentanana). Na izany aza, na dia eo aza ny mety ho voka-dratsiny, dia misy porofo fa io nootropic dia azo zakaina tsara amin'ny dose avo. Ny LD50 (famintinana natao hahitana ny tahan'ny famonoana 50% an'ny mponina) dia mampiseho ny doka 10k mg / kg (mitovy amin'ny gramin'ny 6800 ho an'ny olona XbUMX) amin'ny raty.
Ny fianarana misimisy kokoa dia nampiseho fa "tsy hita ny fiantraikan'ny vokatra manimba" miaraka amin'ny dosage mitovy amin'ny 1636 mg amin'ny olona iray 150.
Na dia fantatra amin'ny anarana hoe tsy milamina aza ny fomba amam-panao, ny olona sasany dia mitatitra ny fanentanana kognita amin'ny alfa-GPC fanampiny.
Mety ho tsara ny mitondra ny Alpha-GPC miaraka amin'ny aretin-tsakafo ara-tsakafo ho an'ny fanentanana (noho ny maha-phospholipid) azy, na dia toa tsy ho tanteraka aza izany.
Ny l-alpha-glycerylphosphorylcholine (fohy amin'ny Alpha-GPC, izay fantatra amin'ny anarana hoe alphoferol choline na glycerophosphocholine) dia choline izay misy phospholipid ary misy metabolisma lecithine, na molekiola lecithine iray misy karazany roa farafaharatsiny. Io dia choline pro-drug , ary fantatra fa vorombola amin'ny acetylcholine sy ny phosphatidylcholine ao amin'ny vatana taorian'ny fanindroany.
Ny Alfa-GPC dia hita ho endri-tsakafo mena sy vatana organika, saingy ny ankamaroany dia tsy dia misy firy loatra amin'ny loharanom-borona voajanahary. Ny fanafody azo avy amin'ny Alpha-GPC dia natao am-pahamendrehana, izay ahafahana manova azy amin'ny atody na leyithin soja. Noho io fampidirana io sy ny loharano, dia indraindray antsoina hoe lecithine semisynthetic.
Alpha GPC dia afaka mampitombo haingana ny fampiasana acetylcholine sy ny neurotransmission ao amin'ny atidoha, izay matetika 20-30 minitra aorian'ny fiterahana. Ny mpampiasa dia afaka manantena ny hahazo fitomboan'ny fisalasalana ara-tsaina, fifantohana ary ny saina ao anatin'io fe-potoana io. Ny fampiasana tsy tapaka miaraka amin'ny fihinanana sakafo matsiro sy ny rafitra fanatanjahan-tena dia hahatsapa ny vokatra feno sy ny vokatra kognitive fampivoarana ny vovobony Raw Alpha GPC ao anatin'ny herinandro voalohany fampiasan'ny herinandro 2.
Alpha GPC voly Marketing
Ahoana no hividianana solosaina Alpha GPC avy any AASraw
Ny vovony Coenzyme Q10
Fampiasan'ny lehilahy (2)
Vovonan'ny Spermidine (3)
Hormonal Enhancing Sex (10)
Vokatry ny vinaingitra (16)
Ny hafa (80)
Zavatra 11 Tokony ho Fantatrao Momba ny Resveratrol
Ny fieken-keloka amin'ny vovoka Phosphatidylserine(PS) ho an'ny olombelona
Ny fanampin'ny Muscle Booster azo antoka indrindra: Vovoka Urolithin A (UA).
Avy amin'ny Reddit & Quora: Fanontaniana 12 (Adihevitra mafana) Momba ny NMN
Zava-mahadomelina 7 ambony indrindra amin'ny fitsaboana kanseran'ny havokavoka-nankatoavin'ny FDA